Tincture CBD dị jụụ | 2022 kacha mma maka mgbu
Atọ ụtọ, strawberry, eke, cinnamon, lemon lime, tangerine
Nha: 500MG | $24.99 , 1000MG $39.99 , 2500 $69.99
Pịa ebe a Iji nye iwu site na saịtị mmekọ anyị Redemperorcbd.com
CBD tincture nwere ọtụtụ uru. A na-eji ihe ahụ eme ihe maka ọgwụgwọ ọgwụ kemgbe oge ochie. Ọ sitere na osisi cannabis, nke nwere ọtụtụ narị ogige kemịkalụ ma ọ bụ cannabinoids. THC bụ cannabinoid a kacha mara amara. Ọ na-emepụta mmetụta euphoric. Cannabidiol bụ cannabinoid ọzọ nke enwere ike iji mepụta mmetụta euphoric. Otú ọ dị, ọ bụghị psychoactive ma nwee mgbochi mkpali, antiseizure na analgesic Njirimara.
Enwere ike iburu mmanụ CBD dị jụụ n'akpa gị ma ọ bụ obere akpa gị ma bụrụ nke a ma ama maka ụtọ okike ya. Ị gaghị enweta nsogbu na FDA n'ihi na ọ nweghị gluten. Karama Dropper na-eme ka ọ dị mfe iji. Ihe ndị dị na tincture CBD azụmahịa adịghị mma. A na-eme ha site na mmanụ hemp organic na ha enweghị ọgwụ nje ọ bụla.
Enwekwara tinctures CBD nwere ụtọ dị, dị ka nke Curaleaf rere. Ị nwere ike ịhọrọ site na atọ ụtọ: vanilla, ginger-cinnamon na lavender-oroma. Ị nwere ike ịgwakọta tincture na ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ nri ọ bụla na-amasị gị ma ọ bụrụ na ị bụghị onye na-amasị ya. Ị ga-enweta ihe kacha mma na ya ma nwee obere mbọ. Ị nwere ike ịgwakọta ya na ihe ọṅụṅụ ọ bụla masịrị gị ma ọ bụ nri ndị ọzọ masịrị gị.
Ị ga-agakwuru onye na-ere ọgwụ na dọkịta tupu ịmalite ịṅụ CMmanụ BD . Ị kwesịrị ịkpachara anya n'ihi na ọ bụghị CBD tinctures ka FDA kwadoro. Tupu ịmalite, ọ dị mma ịkpọtụrụ dọkịta gị. Iji nwalee ma nke a ọ dị gị mma, ị nwere ike ị were mmiri ole na ole kwa awa abụọ ma ọ bụ otu ugboro n'ụbọchị. Ị nwere ike izere mmetụta ndị na-adịghị mma ma nwee ahụike ka mma na tincture dị mma.
Mmanụ CBD , nke na-abụkarị mmanya 60-70%, bụ ihe na-ekpochapụ ahịhịa. Ọ bụ ezie na nzube ya bụ isi bụ iji belata ihe mgbu na nchekasị, a pụkwara iji ya na-agwọ mgbu nkwonkwo ma belata nchekasị. Nke a bụ mpụta ahịhịa a gbanyere mkpọrọgwụ nke etinyere na mmiri mmiri iji hapụ ihe niile eji eme ọgwụ. Enwere ike ịwụsa tincture n'ime karama iko ma tinye ya na mmiri. Ọ dị mfe iri CBD.
CBD tincture nwere nnukwu itinye uche, nke na-eme ka ọ dị irè maka ịgwọ nnukwu ọnọdụ. Ọ dị mfe iji na enweghị mmetụta ọ bụla. Maka nsonaazụ kacha mma, a na-atụ aro ka ị na-eri ounce abụọ nke CBD kwa ụbọchị. Ọ dị mkpa icheta na CBD mmanụ ekwesịghị iri tupu iri nri. N'ihi na ọ nwere ike belata mgbari mgbaze, ọ gaghị enwe shuga.
Ihe kacha mma iji tụọ tincture cbd na trytranquil.net
CBD tincture bụ ihe na-emepụta mmiri mmiri nke osisi cannabis. Ọ na-enye ahụ efe maka ọtụtụ ọrịa ma nwee mmetụta pụrụ iche. E gosikwara na ọ na-ebelata nchekasị na mgbu nkwonkwo. Ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa Mmanụ CBD maka mgbu n'ụlọ ahịa nri ahụike mpaghara gị. Ọtụtụ tincture na-adabere na mmanya. Tinctures ndị a nwere ike ịnwe ihe ruru 60% mmanya nke nwere ike ịdị ize ndụ maka ahụ gị. Ekwesịrị ịkwadebe ihe ndị a na glycerin akwukwo nri.
Enwere ike were tincture CBD n'elu ma ọ bụ sublingually n'otu ụzọ abụọ. Enwere ike were tincture CBD ọnụ. Enwere ike iji tincture CBD belata mgbaàmà dị ka tendonitis na ogbu na nkwonkwo. Ọ nwekwara ike ibelata ahụ mgbu. Tupu iji CBD tinctures, ọ dị mkpa ịgụ na soro ntuziaka niile. E kwesịghị iji tinctures ndị a n'ọnọdụ ọgwụ ndị a na-enye ọgwụ. Otú ọ dị, tinctures nwere ike ịdị mma ma bara uru.
Enwere ụdị abụọ: tinctures CBD na-abụghị mmanya na CBD tinctures na-aba n'anya. Nke mbụ na-adịkarị na ndụ kwa ụbọchị, ebe ndị ọrịa nwere nchekasị na-ahọrọ nke ikpeazụ. Ọ bụ nnukwu nhọrọ maka ndị na-enwe nchekasị ma ọ bụ nsogbu ihi ụra. Enwere ike iji ya mee ihe iji belata mgbaze na nsogbu eriri afọ ndị ọzọ. Maka ndị na-arịa ehighị ụra nke ọma, CBD tincture nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ. Ngwaahịa nwere ọtụtụ uru.
Tincture CBD sitere na mmanụ bụ ihe kacha mma. A tinctures ndị a dị irè karịa ọgwụ CBD mgbe niile n'ihi na ha nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke mmanu mmanu. Ndị mmadụ na-ahụkwa ụdị mmanya na-aba n'anya ka adabara. Ọ na-enwe ike inyere ndị nwere nchekasị na mgbu aka nakwa ime ka ụra dịkwuo mma ma belata ọbara mgbali. Nnyocha ndị ọzọ dị mkpa iji chọpụta dose kacha mma maka ndị na-ata ahụhụ site na ọnọdụ ndị a.